Caafimaadka Mohamed Salah Oo Ka Hadlay Sida Uu Xaalkiisu Yahay, Xilli Uu U Jiifo Xanuunka Korona - jornalizem
Caafimaadka Mohamed Salah Oo Ka Hadlay Sida Uu Xaalkiisu Yahay, Xilli Uu U Jiifo Xanuunka Korona
Xiddiga Liverpool ee Mohamed Salah waxa ka muuqda calaamado yaryar oo xanuunka Korona Fayraska ah, sida uu sheegay dhakhtarka xulka qaranka Masar.
28 jirkan ayaa lagu qasbay inuu karantiil ku galo waddankiisa kaddib markii uu xanuunku ku dhacay xilli uu ka qayb galayay xafladda arooska walaalkii, waxaanu Masar sii joogi doonaa illaa inta uu dhamaysanayo Karantiilka ee baadhitaan kale lagu samaynayo.
Laaacibkan ayaa seegi doona kulanka kooxdiisa Liverpool ay Axadda toddobaadka dambe martida u noqon doonto Leicester City. Waxa kale oo uu ka baaqday kulamadii isreeb-reebka Koobka Afrika ee waddankiisu la ciyaaray Comoros iyo sidoo kale Togo oo toddobaadkan ah.
Dr. Mohamed ABou El Ela oo la hadlay wakaaladda wararka ee Associated Press, ayaa ka war bixiyey xaaladda Mohamed Salah, waxaanu yidhi: “Calaamo yar ayaa ka muuqda, mana aha calaamado waaweyn ama kuwo dhinaca neefsiga la xidhiidha.
“Waxa uu karantiil kaga jirayaa gudaha Masar illaa inta ay tijaabadiisu noqonayso in laga waayay caafimaadka, markaas oo kaliya ayuu dib u safri karaa.”
Dr El Ela ayaa la weydiiyey haddii uu Mohamed Salah xanuunka ka qaaday arooskii walaalkii ee uu ka qayb-galay, waxaanu yidhi: “Cidina ma garanayso. Nasiib-darro, hadda ma garanayno wax kasta oo ku saabsan fayraska. Jawaabtaydu waxay tahay, waxa laga yaabaa inuu halkaa kasoo qaaday, waxa kale oo laga yaabaa in aanu kasoo qaadin.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa dhakhtarku intaa ku daray: “Mo sumcad wanaagsan ayuu leeyahay, waxaanu ka mid yahay ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida. Masar dhexdeeda, waa qof khaas ah. Qof kasta oo halkan jooga wuxuu doonayaa inuu ku caawiyo wax kasta oo karaankiisa ah.
“Shalay waxaan telefoon ka helay wasiirro, qof kasta wuxuu i weydiinayaa sidii ay u caawin kari lahaayeen. Laakiin waxaanu ciyaaraynaa kubbad. Wixii dhacay way dhaceen, dunida kubadda cagta meel kasta oo ay tahayna way ka dhacayaan.”